Hlela phakathi ebusika ku esikhanyayo efasiteleni futhi ingadi elimibalabala elaligcwele Tulips nezinye izimbali - kuba iphupho wonke umuntu. Ukukwenza ngokoqobo akunzima kangako. Kwanele ukubona ezinye imithetho elula: tulip for nokuphoqa izinhlobo ekuseni kungcono ukukhetha ukuhambisana edingekayo izimo lokushisa ngesikhatsi isitoreji kanye ama amila ukudala elilungile inhlabathi ingxube, bese umphumela ngesimo izimbali fresh ngeke bathathe isikhathi eside. Zonke lezi amaqhinga asetshenziswa ukuqinisekisa ukuthi imbali iqhakazile ngesikhathi uncharacteristic, obizwa ziphuzo zazihluzwa.
Ukuphoqa ekhaya noma abamba ukushisa ngamaholide Februwari 14 noma Mashi 8 iqala izinyanga ezimbalwa ngaphambi kulezi zinsuku. Isikhathi esingcono kakhulu ukutshala ama zezitshalo, ukuze eziqhakaza ngamaholide - October-November. Ukuze uthole ukumangala samaholide okokuqala udinga ukukhetha eliphezulu Tulip. Ukuphoqa ekhaya odinga isimo sengqondo unesibopho kakhulu.
Ukuze ukutshala kuphela ama khetha esikhulu aminyene enesisindo mayelana 30 g, sasicwengwa kubo kusukela ishq bese efakwa phansi walungisa ngokukhethekile. Abalimi abanokuhlangenwe nakho bathatha ezingxenyeni alinganayo sawdust zezihlahla nenhlabathi ukuxubana ekhethekile "terra Vita", okuyinto angathengwa at ikhethelo izitolo ezidayisa ama: Crocus, daffodils, Tulips.
Ziphuzo zazihluzwa ekhaya kumele kwenziwe usebenzisa follicle kakade iphathwa amalungiselelo akhethekile ukuze ugweme ukuthuthukiswa bola noma izifo eziningi ezibangelwa amagciwane. Ukuze yokuqhuma omuhle phakathi ukulungele inhlabathi ingxube is kungezwe oluyimpuphu Umanyolo "Fertika Lux" ngesilinganiso 2 wezipuni ngayinye 10 amalitha. Ama of Tulips zitshalwa at ibanga cishe 1.5 cm ngaphandle, kancane baphokophelele wabayisa substrate, ungqimba phezulu ingxube ugcwele mayelana 2 cm bese efakwa ekamelweni kahle umoya (sela, egumbini elingaphansi komhlaba, njll).
Iphuzu ibaluleke kakhulu inqubo nokuphoqa Tulips iwukuhlale lokushisa ethile. Kuze kube maphakathi no-December amabhodwe nge ama watshala kumele kube ezingeni lokushisa mayelana 10 ° C kanye nomswakama isihlobo 70-80% - kuyinto lusebenze kahle ngenxa yokwanda impande mass. Ngalesi sikhathi kubaluleke kakhulu ukuze inhlabathi ihlale olumanzi ngaphandle iphele ke. Amasonto amathathu ngaphambi kokutholakala zom endlini efudumele ezingeni lokushisa mayelana 12-14 ° C liyindawo engcono kunazo zonke lapho ungafaka Tulips esekhulile.
Ukuphoqa ekhaya esikhathini esizayo itholakala kancane kancane ekufundiseni izingane ushiyela ukukhanya. Ukuze wenze lokhu ezinsukwini ezimbalwa amaqabunga ukuvikela elangeni oqinile. amahlumela ogqamile zezitshalo - iyisiginali ukuze andise izinga lokushisa emoyeni ku-20 ° C. Ukuze ukuthuthukisa isitshalo obuqinile stem eside kubaluleke kakhulu ngezikhathi fafaza amahlamvu. Iqhinga lokugcina: izimbali eside sokujabulisa kuwe ubuhle bayo, uma zom kuyadingeka ukwehlisa ezingeni lokushisa elifanele-12 ° C. Ukuphoqa Tulips e greenhouse kwenzeka ku ubuchwepheshe obufanayo.